Xarunta MacPhail Music, dugsiga ugu weyn ee muusikada ee gobolka, wuxuu bixiyaa waxbarashada muusikada 35 qalabka, oo ay ku jiraan codka, saddex meelood oo kala duwan oo ku yaalla dhammaan Twin Cities. Iskuulku wuxuu doonayaa in uu ardayda siiyo dhamaan asalka iyo awoodaha si ay u helaan khibradaha barashada muusikada khaaska ah iyada oo loo marayo macalimiin aan caadi aheyn, barnaamijyo casri ah iyo tiknoolaji waxbarasho oo isku dhafan si loo abuuro natiijooyin guul leh. MacPhail wuxuu u shaqeeyaa sidii loo badali lahaa nolosha iyo beelaha iyada oo loo marayo barashada muusikada gaarka ah.
Iyadoo qayb ka ah qorshaha barnaamijka farshaxanka ee lagu taageerayo mashaariicda la beegsanayo ee ururada farshaxanka, McKnight wuxuu taageeray MacPhail's abuuritaanka Kooxda Horumarinta Farshaxanka (ADT). Iyadoo loo marayo ADT, MacPhail waxay bixisaa farshaxanada farshaxanka ee leh fursado iyo khayraad taageeraya dadaalkooda farshaxanka kuwaas oo sii xoojin doona isdhexgalka ardayda, jaaliyadaha farshaxanka ah ee bulshada oo dhan, iyo riwaayadaha socdaalka. Iyada oo qayb ka mid ah kooxuhu ka shaqeeyaan, ADT waxay qorsheeyeen hawlihii MacPhail ee sannadlaha ah ee horumarinta xirfadda. ADT ayaa abaabulay riwaayad subax ah oo isku xirta macalimiin ka soo jeeda asal, qalab, iyo noocyo kala duwan. Waxay sidoo kale qorsheynayeen kulanno jebin ah oo ay ka soo xusheen macalimiinta inay ka doortaan, sida yoga, Intro to Discovery iyada oo loo marayo Farshaxan Muuqaal, iyo dabeecadda socodka wabiga Mississippi. Fursadahaani waxay ka caawiyaan MacPhail inay gaaraan himiladeeda soo bandhigida falsafada cusub ee horumarinta xirfadeed iyada oo la siinayo ilo lagu caawinayo barista muusikada farshaxanka abuura, baran, iyo iskaashi.
Laga soo bilaabo aasaaskii 1907, MacPhail Centre for Music ayaa koray si ay u noqoto urur madax-bannaan oo ka mid ah safka hore ee waxbarashada muusikada iyo qaddarinta farshaxanka, iyo hogaamiye daaweynta muusikada, Suzuki Talent Talent, Barnaamijka Iskaashiga Carruurnimada Hore iyo barnaamijyada iskaashiga bulshada. MacPhail ayaa sidoo kale taageertaa farshaxanada shakhsi ahaaneed iyada oo loo marayo barnaamij isweydaarsi oo sidoo kale ay maalgeliso Hay'adda McKnight Foundation.
Casharrada soo raynaya Waxaan ka baran karnaa boorsooyinka